देशमा अनिष्ट हुँदैछ - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
देशमा अनिष्ट हुँदैछ
दलहरु विग्रहमा छन् । आफू आफैमा नमिल्ने दलहरुले के गर्लान् ? जनतालाई यी दलहरुप्रति पटक्कै भरोसा छैन । राष्ट्रियता इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा पूर्व पञ्चहरुको पार्टी एक हुने हल्लाले डराएर एमाओवादी, काँग्रेस र एमाले सहमतिका लागि सँगै बस्दै आएका थिए ।
पूर्वपञ्चहरु सहभागी तीनवटा दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीबीचको एकता वार्ता भंग भएको छ । यो सँगै पार्टी एकीकरण गर्ने प्रयास अन्नतः फेरि पनि विफल भएको छ । अन्तरिम संविधान ०६३ बमोजिममात्रै महाधिवेशनमा प्रस्ताव लग्न सकिने सहमति बहुमतले पास भएपछि थापाले एकता वार्ता बहिष्कार गरेपछि पार्टी एकीकरणको सम्भावना टरेको हो ।
तीन पूर्वपञ्चहरुको दलबीच आइतबारबाट राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको निवास मालिगाउँ चलेको एकता वार्तामा यसअघि भएको सहमति बहुमतले पारित भएपछि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले सोमवार वार्ता बहिष्कार गर्नु भएको हो । राजतन्त्र लगायतका सबै मुद्दाहरु महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउनुपर्ने कमल थापाको प्रस्तावलाई भने राजपा र राप्रपाले अस्वीकार गरेका छन् । राजपा र राप्रपाले भने अन्तरिम संविधान ०६३ विपरित गए जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने भएकाले कमल थापाको प्रस्ताव आफूहरुलाई अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् ।
अर्कातर्फ सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्यहरुले लडाकूहरुको शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे छलफल गर्न माग गरेका छन् । शिविरमा अनियमिता भएको भन्दै छानविनको माग गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिहरुले विशेष समितिको सोमबार बसेको बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्री एवं विशेष समिति संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । लडाकूहरु विशेष समितिको मातहतमा आइसकेको अवस्थामा त्यहाँ भएको भनिएको अनियमितताको छानविन गर्ने काम विशेष समितिको भएको उनीहरुको भनाई छ ।